विश्वकै धनी अमेजनका सीईओ जेफको डिभोर्स, कसरी गरे सम्पत्ति बाँडफाँड? - Sabal Post
विश्वकै धनी अमेजनका सीईओ जेफको डिभोर्स, कसरी गरे सम्पत्ति बाँडफाँड?
वासिङटन –विश्वकै धनी व्यक्तिका रूपमा चिनिएका अमेजन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जेफ बेजोज र उनकी पत्नी म्याककेन्जीको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यको अनुसार २५ वर्षपछि बुधवार उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको हो ।
म्याककेन्जीले करिब ६८ बिलियन डलर कमाइसकेकाे बताइएकाे छ । उनी विश्वकाे पाँचाै
धनाढ्य रहेकाे समेत बताइएकाे छ ।
दम्पतीले जान्नुपर्ने एकअर्काको कुरा
सकियो लन टेनिस प्रतियोगिता
नेकपा पुर्नगठन दिवसमा बिप्लबले पठाए शुभकामना पत्र